Nomena tombony manokana ireo zanaky ny mpiasa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Dons à l’association des laveurs de linge et aux sportifs de Marovatana il y a 5 jours
Ny fampandrosoana maharitra an’i Mahanoro no tanjona il y a 6 jours
Etat de droit, a-t-on besoin de toi ? il y a 9 jours
Les délégués du directeur financier en formation il y a 11 jours
Présentation de la Politique Générale de l'Etat il y a 16 jours
Le candidat Rajoelina a occulté l’accaparement des terres il y a 17 jours
Les 22 ministres il y a 23 jours
“Tana Masoandro” ou l’exode urbain en plus grand il y a 24 jours
La place de la communication dans la promotion de l’excellence pour 2018-2022 il y a 26 jours
Nicolas Dupuis abandonne-t-il les Barea ? il y a 27 jours
Noely fetin’ny ankizy… Eken’ny rehetra izany fomba fijery izany na kristianina na tsia. Mahatsapa izany ny mpiandraikitra eto amin’ny foiben’ny Paositra Malagasy. Vao mainka nahazo vahana ny teo amin’ny fitantanana foibe satria nisy ny toromarika manokana avy amin’ny Minisitry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra (Mptdn). Tsiahivina fa ny Paositra Malagasy dia rantsana iray na service rattaché eo anivon'ny Mptdn. Nanome toromarika ny Minisitra Neypatraiky A. Rakotomamonjy ny hanamafisana ny fanohanana ny sosialin’ny mpiasa sy ny sosialim-bahoaka amin’ny ankapobeny ary vonona ny mpitantana foibe eo amin'ny Paositra Malagasy. Entina hanatanterahana izany toromarika izany dia nanokana tapak’andro fialam-boly ho an’ny ankizy ny mpitantana ny foiben’ny Paositra Malagasy.
Tapak’andro feno fifaliana no natolotry ny mpitantana foibe teo anivon’ny Paositra Malagasy ho an’ireo zanakin'ny mpiara-miasa. Natao ny 26 desambra teo izany. “Spectacle et animation, château gonflable, facepainting, kermesse, fresque murale, marionnette, tour de magie…” santionany tamin’ireo fialam-boly azon’ny ankizy natrehana sy nilalaovana ireo. Nanan-jara tokoa ireo kilonga namaly antso satria fialam-bola malaza amin’izao fotoana izao ireo rehetra ireo. Mbola nanomana panier goûter nataon’ny zaza tsirairay ody ambavafo ny mpikarakara.
Ny 26 desambra izany. Talohan’io tapak’andro io anefa dia efa voatsinjo ireo tamin’ny alalan’ny solom-pen’akoho natao anaty valopy fanomen’ny minisitera isaky ny vanin’andro fety. Fa vao tsy ela koa dia nanolotra kit scolaire ho an’ny zanakin’ny mpiasa ny minisitera araka ny ezaka nataon’ny Minisitera izany. FA io hita amin'ny sary io ireo zanakin'ny mpiara-miasa eo amin'ny Paositra Malagasy niaraka amin'ny ray aman-dreny nifalifaly sy niravoravo fa fety ny andro.
Araka ny fanazavana dia santatra ambava rano iny hetsika iny. Ny manetsabe mbola ho avy… Firarian-tsoa feno ho an’ny rehetra no namaranana ny tapak’andro fialamboly.
Association MIAHI AMBOHIDRATRIMO : Dons à l’association des laveurs de linge et aux sportifs de Marovatana - il y a 5 jours
Asssociation Fandrosoana : Ny fampandrosoana maharitra an’i Mahanoro no tanjona - il y a 6 jours